Fiainana tondraka - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Fiainana be dia be
"Kristy tonga hanome fiainana azy, fiainana be dia be" (Jaona 10:10). Moa ve Jesosy nampanantena anao fiainana feno harena sy fanambinana? Mety ve ny mitondra ny fanahiana eo amin'izao tontolo izao eo amin'Andriamanitra ary hitaky izany aminy? Rehefa manana fananana ara-nofo bebe kokoa ianao, manana finoana bebe kokoa ve ianao satria voatahy?
Hoy i Jesosy: “Mitandrema, ka mitandrema, fandrao ho azon’ny fitsiriritana rehetra; fa tsy misy olona velona amin’ny fananana fananana be” (Lioka 12,15). Tsy refesina amin’ny harentsika ara-nofo ny hasarobidin’ny fiainantsika. Mifanohitra amin’izany, raha tokony hampitaha ny fananantsika amin’ny hafa isika, dia tokony hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra aloha fa tsy hanahy ny amin’ny fananantsika eo amin’izao tontolo izao (Matio. 6,31- iray).
I Paoly dia tena nahay ny fomba hananana fiainana feno. Na afa-baraka izy na noderaina, voky ny kibony na nikotrokotroka foana, nifandray tsara izy na nizaka ny fahoriany irery, afa-po sy nisaotra an’Andriamanitra tamin’ny toe-javatra rehetra izy (Filipiana). 4,11-13; Efesianina 5,20). Ny fiainany dia mampiseho amintsika fa mahazo fiainana be dia be isika na inona na inona toe-javatra misy antsika ara-bola sy ara-pihetseham-po.
Jesosy milaza amintsika ny antony nahatongavany teto an-tany. Miresaka fiainana feno izy ary midika fiainana mandrakizay. Ny teny hoe "feno" dia avy amin'ny teny grika (perissos grika) ary midika hoe "lavitra; Bebe kokoa; mihoatra ny besinimaro ”ary manondro ilay teny kely," fiainana "tsy dia mahaliana.
Tsy nampanantena antsika ho avy amin'ny fiainana feno i Jesosy, fa efa nomeny antsika izao. Ny fahatongavany eto amintsika dia manampy zavatra tsy azo esorina amin'ny fisiantsika. Noho ny fisiany ao amin'ny fiainantsika dia tsy misy dikany ny fiainantsika ary ny isa ao amin'ny kaontin'ny bankintsika no miainga any aoriana.
Ao amin'ny Jaona toko faha dia momba ny mpiandry izay lalana tokana mankany amin'ny ray. Zava-dehibe amin'i Jesosy ny hananantsika fifandraisana tsara sy tsara amin'ny Raintsika any an-danitra, satria io fifandraisana io no fototry ny fiainana feno. Tsy mitazona ny fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'i Jesosy ihany isika, fa afaka manorina fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalany.
Ny olona dia mampifandray ny harena ara-nofo amin'ny harena sy ny harena be dia be, nefa Andriamanitra kosa dia manondro antsika amin'ny fomba hafa. Be ny fiainany feno antsika feno fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-po, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, famindram-po, fanetren-tena, fanetren-tena, herin'ny toetra, fahendrena, hafanam-po, fahamendrehana, fahombiazana, fahatokisan-tena, fahatokisana ary ambony rehetra manana fifandraisana velona aminy. Tsy mahazo aina ampy amin'ny alàlan'ny harena ara-nofo izy ireo, fa omen'Andriamanitra raha omenay fanomezana izy ireo. Arakaraka ny manokafanao ny fonao amin'Andriamanitra, no manjary manatsara ny fiainanao.